उनी न त कुनै डाक्टर हुन्, न त कुनै परामर्शदाता । तर उनले प्रति घण्टाको करीब एक हजार रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिन्छन् । अनि महिलाहरु उनलाई घरमै बोलाएर उक्त शुल्क तिरेर भरपूर प्राप्त गर्दछन् । आखिर जापानका टाकानोबू निसिमोटोले गर्ने खास कुरा के हो ? जसका लागि महिलाहरुले चर्को शुल्क तिर्दछन् ?
तपाइँले अनेक थरी सोँच्नुभयो होला । तर होइन, त्यस्तो । मात्र आफुसँगको चिनापर्ची र भेटघाटका लागि मात्र निसिमोटोले यत्रो रकम अशुल्छन् । उनले अमेरिका र जापानमा समेत अनेक प्रकारका जागिर गरिसकेका छन्, तर अहिले चाहीँ उनी भाडामा उपलब्ध छन् ।